Ciidamo Ethiopian ah oo ku wajahan degmooyin Shabaab ay ku xooganyihiin oo ku yaalla gobalada dhexe. | warsugansomaliya.wordpress.com
Ciidamo Ethiopian ah oo ku wajahan degmooyin Shabaab ay ku xooganyihiin oo ku yaalla gobalada dhexe.
Wararka laga helayo magaalada Guri-ceel ee gobalka Gal-guduud ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo tira badan oo qeyb ka ah meleteriga Ethiopia ay deegaanadaasi ka wadaan qaban-qaabada duulaan ay ku qaadaan deegaanada Shabaabku ay gobalkaasi uga xooganyihiin.
Goob-joogayaasha ayaa waxa ay xaqiijinayaan in ciidankaasi oo aad u qalabeysan ay ku jaheysanyihiin deegaanno ay kamidyihiin degmada Ceel-buur ee gobalkaasi oo ah xudunta Shabaabka gobalda dhexe halkaasi oo ay ka taagantahay cabasho ay wadaan dadka deegaanka.
Ciidanka Ethiopia ayaa xilligii dowladii SHeekh Shariif waxa ay mar kala wareegeen Shabaab degmada Ceel-buur iyo deegaanada ku xeeran inkasta oo dib ay uga laabteen goor danbe, arintaas oo dhalisay in Shabaab ay gowracaan dad badan oo lasheegay in ay ku eedeeyeen in Ethioipan-ka la shaqeynayeen.
Si kastaba, xariir aan lasameynay degmada Ceelbuur ayaa waxaan ku ogaanay in ay jirto cabsi laxariirta meleteriga Ethiopia in deegaanka ay si dahqas ah ku soo gaaraan.
Shabaab oo jab kala kulmay dagaal ay maleeshiya beeled kula galeen gobalka Gal-guduud.
← Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay wararka sheegaya in uu jiro wada hadal kala dhexeeya Sheekh Muqtaar Rooboow
War Deg Deg Ah Qarax Xoogan oo goordhaw ka dhacay Bakaaraha iyo Gaari ay wateen Ciidanka Dowlada oo gubtay →